Medjugorje: il terzo segreto "la Madonna ci insegna a non aver paura del futuro" | PREGHIERA&NEWS
Medjugorje: ihe nzuzo nke atọ "Nwanyị anyị na-akuziri anyị ka anyị ghara ịtụ ụjọ maka ọdịnihu"
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 22, 2020 Septemba 22, 2020
Otu onye na-ekwu na mgbe ụfọdụ nrọ bụ amụma, oge ụfọdụ ọ bụ naanị mkpụrụ nke echiche anyị, uche nke na-eche echiche dị iche iche wee tinye na ụbụrụ anyị. Ekwenyere m na ọ mere na oge ụfọdụ ị rọrọ nrọ banyere ihe wee bie ndụ n'eziokwu, ma ọ bụ ịchọta onwe gị na mberede na ihe a na-akpọ dejavù, ọnọdụ nke yiri ka ị hụlarị.
Yabụ ka anyị bido n'echiche a, na nrọ bụ nrọ, eziokwu na eziokwu. Anyị kwesịrị ịkpachara anya na "amụma" ahụ, n'ihi na ọ bụ na ndị na-agba afa na ọrụ ma ọ bụ ụfọdụ egwuregwu na-ajụ, nke ọtụtụ ndị Katọlik, n'agbanyeghị na ụka ejirila ọtụtụ oge, na-aga. Nke a bụ ọchịchọ anyị ịmara, ịghọta, ịkọ ọdịnihu, abụwo akụkụ nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ihe dị mkpa abụghị ịdabere na ndị chọrọ irite uru na "amụma" ndị a. Ma na madụ, Chukwu na-enye amara a, o zuru ezu ilebanye anya na Akwụkwọ Nsọ iji ghọta na ọtụtụ narị afọ agaala ndị amụma gbara anyị gburugburu.
Mgbe m kwuchara ihe a, achọrọ m ịgwa gị ihe mere ka m chee echiche.
Otu onye kpọrọ m, nwee ezi nguzo, ahụike ma dị njọ, enyi wee gwa m: "You mara, m rọrọ nrọ, m rọrọ nrọ ihe bụ akara ngosi a na-ahụ anya nke ga-adị n'ugwu Podbrodo mgbe ihe nzuzo ahụ ga-abịarute."
M wee sị “Oh ee? Kedu ihe ọ ga-abụ? "
Ya: “Isi iyi, iyi mmiri nke ga-esi n’Ugwu Podbrodo gafere. Echere m na m nọ na Podboro na otu obere isi iyi mmiri si na obere oghere dị na nkume pụta. Mmiri ahụ si n'ugwu ahụ na-agbada n'agbata ụwa na nkume ruo mgbe o ruru obere ụlọ ahịa dị n'ọnụ ụzọ Podboro nke ji nwayọọ nwayọọ malite ide mmiri. N'oge ahụ, ọtụtụ ndị njem ala nsọ ya na ndị bi na Medjugorje bidoro igwu mmiri iji chekwaa mmiri n'ụlọ ahịa mana mmiri na-esite n'ọdọ mmiri ahụ ruo mgbe ọ ghọrọ ezigbo iyi. Ngwurugwu nke ala nke ndi mmadu gwuru mere ka mmiri ghaghaa n'okporo uzo nke na-eduga n'ugwu ahu ma mmiri ahu gafere n'okporo uzo ma chee ihu na ndagwurugwu nke na-eduga na uka, na n'ọnụ ya enwere igwe ndi njem niile. Naanị mmiri ahụ gwuru akwa nke iyi ahụ nke na-asọba n'ime iyi ahụ na-agafe n'azụ ụka S Giacomo. Onye ọ bụla tiri mkpu na ihe ịrịba ama ahụ ma onye ọ bụla kpere n'akụkụ ọnụ iyi ọhụrụ ahụ. "
Ndị gara Medjugorje mara na nsogbu mmiri adịla mgbe ọ bụla, ọtụtụ oge ọ na-adịghị na nke a abụwo nsogbu. Ha gbalịrị ọtụtụ oge ịchọta "akwara" ha gwuru n'ọtụtụ ebe n'ime obodo ahụ, mana ọ rụpụtara ezigbo nsonaazụ. Naanị nkume na ụwa uhie dị ike ka okwute. M biri na Medjugorje afọ abụọ ma enwere m ike ịkwado gị na mgbe m na-eme ubi akwụkwọ nri, achọrọ iburu iji nwee ike ịkwaga ụwa nke siri ike ka okwute si n'oké okpomọkụ ahụ.
Mgbe ahụ ihe nzuzo ahụ na-ekwu maka "nnukwu ihe ịrịba ama n'elu ugwu, nke mmadụ na-enweghị ike ime, ga-ahụ mmadụ niile wee nọrọ ebe ahụ na-adịgide adịgide."
Ihe ndozi nke ala ọ ga - eme ka isi iyi a pụta ma ọ bụ na ọ ga - abụ ihe ịrịba ama karịrị nke mmadụ?
Na Lourdes ha hụrụ ka mmiri na-asọ n'okpuru anya ha na grotto, mgbe obere ọhụụ ọhụụ bụ Bernadette Soubirus kpụchara ala ebe a gosipụtara ya site na "Nwanyị" ahụ, Nwanyị anyị nke Lourdes. Mmiri na-agwọ ọrịa, ọtụtụ na-aga Lourdes maka mmiri ọrụ ebube a. Ọtụtụ mgbe n’ebe ndị a na-agagharị agagharị, enwere mgbe ọ bụla ihe metụtara mmiri ma ọ bụ isi iyi ma ọ bụ olulu mmiri, ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ mmiri ọrụ ebube oge niile, nke na-eme ka obi na ahụ dị ọcha.
Mana nne anyi nwere ike ikwughachi otua? Ndị okenye kwuru na amachibidoro iwu, ịdị mfe bụ eziokwu. Anyị na-agbasi mbọ ike ịghọta ma kama ihe na-agafere anyị mgbe niile n'ụzọ dị mfe ma dị mfe. Ruo ọtụtụ narị afọ, ọbụnadị mgbe a mụrụ Jizọs, nwa Chineke, ndị mmadụ tụrụ anya na ọ ga-esi n’eluigwe gbadata dịka nnukwu eze. Kama nke ahụ amụrụ ya n'ihe e ji etinyere anụ ụlọ nri wee nwụọ n'elu obe. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole, ndị dị mfe, ndị nwere nnukwu obi ma isi dara ogbenye, amatala ya.
Agaghị m agwa gị "amụma abalị" nke otu enyi m ma ọ bụrụ na echetaghị m na m anụworị akụkọ a. N'ezie, n'otu n'ime akwụkwọ Nwanne nwanyị Emmanuel, "Nwa ahụ zoro ezo", onye nọn ahụ bi na Medjugorje ọtụtụ afọ, anyị gụrụ akaebe nke "onye amụma".
Aha ya bụ Matè Sego ma a mụrụ ya na 1901. Ọ nweghị ụlọ akwụkwọ ọ bụla, ọ maghị agụ ma ọ bụ dee. Ọ rụrụ obere ala, dinara n’ala, enweghị mmiri ma ọkụ eletrik ma drankụọ nnukwu grappa. Ọ bụ nwoke ọtụtụ mmadụ hụrụ n'anya n'obodo Bijakovici, na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-egwuri egwu mgbe niile. Ọ biri na ụkwụ nke ugwu nke apparition Pobrodo.
Otu ụbọchị Matè malitere ịgwa m, sị: “Otu ụbọchị, a ga-enwe steepụ buru ibu n’azụ ụlọ m, nwee ọtụtụ steepụ dị ka ụbọchị nke afọ. Medjugorje ga-adị oke mkpa, ndị mmadụ ga-esi n'akụkụ niile nke ụwa bịa ebe a. Ha ga-abịa ikpe ekpere. Churchka agaghị abụ obere ka ọ dị ugbua, mana ọ kariri ma jupụta na mmadụ. O nweghi ike iburu ndi nile ga-abia. Mgbe ụka nke nwata m mebiri, m ga-anwụ ụbọchị ahụ.
A ga-enwe ọtụtụ okporo ámá, ọtụtụ ụlọ, bukwuru ibu karịa obere ụlọ anyị anyị nwere ugbu a. Buildingsfọdụ ụlọ ga-adị nnukwu. "
N'oge ahụ n'akụkọ Matè Sego nwere mwute ma kwuo "Ndị anyị ga-eresị ala ha ndị ala ọzọ ga-ewukwasị ya. Ọtụtụ mmadụ ga-anọ n’elu ugwu m nke na ị gaghị ehi ụra n’abalị. ”
N'oge ahụ, ndị enyi Matè chịrị ọchị ma jụọ ya ma ọ hadụbigara mmanya ike.
Ma Matè gara n'ihu, sị: “Unu atụfula ọdịnala unu, kpekuo Chineke ekpere maka mmadụ nile na maka onwe unu. A ga-enwe isi mmiri ebe a, isi iyi nke ga-enye nnukwu mmiri, nke ga-enye nnukwu mmiri nke ga-enwe ọdọ mmiri ebe a na ndị anyị ga-enwe ụgbọ mmiri ma ha ga-agbanye ha na nnukwu okwute ”.
Saint Paul na-atụ aro ka anyị chọsie ike maka onyinye ime mmụọ karịa nke amụma, mana ọ kwupụtara na "amụma anyị ezughị oke". Eziokwu nke ihe a niile bụ na chọọchị ochie ka dị, ala ọma jijiji mebiri ya, nke mere na ụlọ mgbịrịgba dara. Na 1978, a na-egwupụta chọọchị a ma gbaa ya n'ala ma ọ dị ihe dị ka 300 mita site na Chọọchị San Giacomo, na nso ụlọ akwụkwọ ahụ, na Matè hapụrụ anyị ụbọchị ahụ. Afọ ole na ole tupu ngosi ahụ amalite. Emepere ụka dị ugbu a ma gọzie ya na 1969.
Mirjana na echetara anyị “Nwanyị anyị na-ekwu mgbe niile: Ekwula okwu banyere ihe nzuzo, mana kpee ekpere ma onye ọ bụla nke metụrụ m dịka nne na Chukwu dịka Nna, atụla egwu maka ihe ọ bụla. Anyị niile na-ekwukarị gbasara ihe ga-eme n’ọdịnihu, mana onye n’ime anyị ga-ekwuli ma ọ ga-adị ndụ echi? Onweghi! Ihe nne nwanyi anyi na akuziri anyi bu ka anyi ghara ichegbu onwe anyi banyere odinihu, kama ka anyi di na njikere n’oge ahu ka anyi zute Onye nwe anyi ma ghara igbu oge ikwu banyere ihe nzuzo na ihe di otu a. Onye ọ bụla na-achọ ịmata ihe, mana mmadụ ga-aghota ihe dị ezigbo mkpa. Ihe dị mkpa bụ na n’oge ọbụla anyị dị na njikere ịgakwuru Onye-nwe na ihe ọbụla mere, ọ bụrụ na o mee, ga-abụ uche Onye-nwe-anyị nke anyị enweghị ike ịgbanwe. Anyị nwere ike ịgbanwe naanị anyị! "
Nke gara aga Post Gara aga post:Uru Chineke bara uru: Achịcha ụbọchị niile, dozie ọrụ
Next Post → Post ozo:Chee echiche taa na ọnya ọ bụla ị ka bu n’uche